Shabaabkii ugu tirada badnaa oo la wareegay deegaan ku dhow magaalada Baydhabo. | XAL DOON
Home NEWS Shabaabkii ugu tirada badnaa oo la wareegay deegaan ku dhow magaalada Baydhabo.
Warar ay heshay Warbaahinta Xaldoon.Net, ayaa sheegaya in dagaal yahanada Shabaab ay qabsadeen deegaanka Goof gaduud Buurey oo qiyaastii 35KM u jirta Magaalada Baydhabo ee xarunta KMG Maamulka Koonfur Galbeed.
Qabsashada Shabaab ee deegaankan Istiraatiijiga ahaa ayaa ka danbeysay kadib markii ay saaka deegaanka isaga bexeen ciidamada Milatariga, kuwaasoo ka warhelay in Shabaab tiro badan ay dhankooda duulaan ku soo yihiin.
Dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya in Shabaab ay saldhigyo durba ka sameysteen gudaha deegaanka, iyagoo fagaarayaal kala hadlay dadka shacabka ah, waxeyna u sheegeen iney maamulkooda la shaqeeyaan.
Ciidamadii milatariga ee deegaanka isaga baxay ayaa u jiheystay dhanka magaalada Baydhabo, mana jirto wax war ah oo Saraakiisha Koofur Galbeed ay arintan ka soo saareen.
Shalay dagaal ka dhacay deegaanka Daynuunay ee Gobolka Baay ayaa Al Shabaab waxa ay ku dileen Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Xoogga dalka Somaliya & Saddex Askari, iyadoo Saraakiisha Militarigana ay sheegteen Shabaab inay ka dileen ciidan badab.